http mamiriro emakodhi ane tsananguro
Kuru Kuongorora Moto HTTP Mamiriro Ekumira Nematsananguro
HTTP Mamiriro Ekumira kana Makodhi Ekupindura akaiswa mumapoka mashanu. 1 × In Informational, 2 × Success Kubudirira, 3 × Red Redirection, 4 × CaKuteerera Kwevatengi, 5 × Server Server Kanganiso.
Iyi posvo ine rondedzero izere yeHTTP mamodhi kodhi ine tsananguro pfupi yemakhodhi ekupindura akajairika.
Patinoita API kuyedza, kazhinji chinhu chekutanga chatinoongorora pamhinduro kubva kune API kufona ndiyo mamiriro kodhi. Izvo zvakakosha kuti isu tizive nezve angangoita akajairika mamiriro emakodhi kuti tikwanise kuona nyaya nekukurumidza.
1 × ara Ruzivo
Iyo 1xx (Informational) kirasi yemamiriro kodhi inoratidza mhinduro yepakati yekutaurirana chinongedzo kana kukumbira kufambira mberi usati wapedza chiito chakakumbirwa uye kutumira mhinduro yekupedzisira.
101 Kuchinja Mitemo
2 × Success Kubudirira
Iyo 2xx (Yakabudirira) kirasi yemamiriro kodhi inoratidza kuti chikumbiro chemutengi chakagamuchirwa zvinobudirira, kunzwisiswa, uye kutambirwa.
Iyo mazana maviri (OK) kodhi yemamiriro inoratidza kuti chikumbiro chabudirira. Mubhadharo wakatumirwa mumhinduro mazana maviri zvinoenderana nenzira yekukumbira.
Iyo 201 (Yakagadzirwa) kodhi yekodhi inoratidza kuti chikumbiro chakazadzikiswa uye zvakakonzera kuti chimwe kana zvimwe zviwanikwa zvitsva zviitwe.
204 Hapana Zvemukati
Iyo 204 (Hapana Zvemukati) mamiriro kodhi inoratidza kuti sevha yakabudirira kuzadzisa chikumbiro uye kuti hapana zvimwe zvemukati zvekutumira mumhinduro yekubhadhara mutumbi.
202 - Yakagamuchirwa
203 - Risina-chiremera Ruzivo
205 - Dzorera Zvemukati
206 - Yakasarudzika Zvemukati
207 - Yakawanda Mamiriro
208 - Yakatotaurwa
226 - IM Yakashandiswa
Dzidza hwaro hweHTTP
3 × Red Redirection
Iyo 3xx (Kudzoreredza) kirasi yemamiriro kodhi inoratidza kuti zvimwe zviito zvinoda kutorwa neanoshandisa mushandisi kuitira kuzadzisa chikumbiro.
301 Inofambiswa Nokusingaperi
Iyo makumi matatu negumi (Inofambiswa Nokusingaperi) kodhi yemamiriro inoratidza kuti chinhu chakanangwa chakapihwa URI itsva yekusingaperi uye chero mareferenzi emangwana kune ino sosi anofanirwa kushandisa imwe yeakavharirwa URIs.
Iyo 302 (Yakawanikwa) kodhi yekodhi inoratidza kuti chinhu chakanangwa chinogara kwechinguva pasi peiyo yakasiyana URI.
304 - Kwete Kuchinjwa
300 - Zvisarudzo Zvakawanda
303 - Ona Zvimwe
305 - Shandisa Proxy
307 - Yechinguva Dzorera
4 × EraKuteerera Kwevatengi
Iyo 4xx (Client Error) kirasi yeiyo mamiriro kodhi inoratidza kuti mutengi anoita kunge akanganisa.
Iyo mazana mana (Yakashata Chikumbiro) kodhi yemamiriro inoratidza kuti sevha haigone kana haigadzirise chikumbiro nekuda kwechimwe chinhu chinoonekwa kunge chikanganiso chemutengi (semuenzaniso, malformed chikumbiro syntax).
401 Isina mvumo
Iyo makumi mana negumi (isina kubvumidzwa) kodhi yekodhi inoratidza kuti chikumbiro hachina kuiswa nekuti hachina hunhu hwechokwadi hwechokwadi hwechinangwa chakanangwa.
Iyo makumi mana nematatu (Yakarambidzwa) kodhi yekodhi inoratidza kuti sevha yakanzwisisa chikumbiro asi ichiramba kuitendera.
404 Haina Kuwanikwa
Iyo makumi mana nemakumi mana (Haina Kuwanikwa) kodhi yemamiriro inoratidza kuti iyo Yekutanga server haina kuwana izvozvi zvinomiririrwa kune chakanangwa sosi kana haisi kuda kuburitsa kuti iripo.
405 Maitiro Asina Kubvumidzwa
Iyo makumi mana nemakumi mashanu (Maitiro Asina Kubvumidzwa) kodhi yekodhi inoratidza kuti nzira inogamuchirwa mumutsara-wekukumbira inozivikanwa neiyo Yekutanga server asi isingatsigirwi nechinangwa chekushandisa.
415 Rudzi rweMedia Rusingatsigirwe
Iyo 415 (Unsupported Media Type) mamiriro kodhi inoratidza kuti iyo Yekutanga server iri kuramba kushandira chikumbiro nekuti iyo yekubhadhara iri mufomati isingatsigirwe nenzira iyi pane yakatarwa sosi. Dambudziko remafomati rinogona kunge rakakonzerwa nechikumbiro chakaratidzirwa Zvemukati-Rudzi kana Zvemukati-Encoding, kana semhedzisiro yekuongorora iyo data zvakananga.
402 Kubhadhara Kunodiwa
407 Proxy Kusimbiswa Kunodiwa
408 Kumbira Nguva
411 Kureba Kunodiwa
412 Kuchengetedza Kwakundikana
413 Kubhadhara Kwakura Zvakakura
Chikumbiro che440-URI Yakareba
416 Yakakumbirwa Range Isinga Gutsikane
417 Tarisiro Yakundikana
418 Ndiri teapoti
421 Chikumbiro Chakatsauswa
422 Sangano risingagadzirisike
424 Yakundikana Kuvimbika
428 Kuchengetedza Kunodiwa
429 Zvikumbiro Zvakawandisa
431 Kumbira Musoro Wenzvimbo Dzakakura Zvakakura
444 Kubatana Kwakavharwa Pasina Kupindura
451 Haiwanikwe Nezvikonzero zveMutemo
499 Mutengi Akavhara Chikumbiro
5 × Server Server Kukanganisa
Iyo 5xx (Server Error) kirasi yemamiriro kodhi inoratidza kuti sevha inoziva kuti yakanganisa kana kuti haigone kuita nzira yakakumbirwa.
500 Yemukati Server Kanganiso
Iyo mazana mashanu (Yemukati Server Kukanganisa) mamiriro kodhi inoratidza kuti sevha yakasangana nemamiriro asingatarisirwe akaitadzisa kuzadzikisa chikumbiro.
502 Gedhi Rakaipa
Iyo 502 (Yakashata Gateway) mamiriro kodhi inoratidza kuti sevha ichiri kushanda segedhi kana proxy, yakagamuchira mhinduro isiriyo kubva kune inbound server iyo yaakawana apo ichiedza kuzadzisa chikumbiro.
503 Service Haiwanikwe
Iyo 503 (Service Isingawanikwe) kodhi yekodhi inoratidza kuti sevha parizvino haikwanise kubata chikumbiro nekuda kwekuwandisa kwenguva pfupi kana kurongwa kwakarongwa, izvo zvingangodzikiswa mushure mekunonoka.
504 Gateway Nguva Yakwana
Iyo 504 (Gateway Timeout) mamiriro kodhi inoratidza kuti sevha ichiri kushanda segedhi kana proxy, haina kugamuchira mhinduro nenguva kubva kune yekumusoro server iyo yaida kuwana kuitira kuti ipedze chikumbiro.
501 Haina Kuitwa
505 HTTP Shanduro Isina Kutsigirwa
506 Variant Zvakare Inotaurirana
507 Yakakwana Kuchengeta
508 Loop Yakawanikwa
510 Haina Kuwedzerwa
511 Network Kusimbiswa Kunodiwa
599 Network Kubatanidza Nguva yekukanganisa
Internet Injini Yekuita Task Force
Maitiro ekugovana ako mafoto enzvimbo nepasi muGoogle Mepu
Yako isinganzwisisike Pixel 3 skrini inopenya nyaya dzinogona chete 'kugadziriswa' nekutsiva
Asus ZenWatch 3 pakupedzisira kuwana iyo Android Wear 2.0 kugadzirisa